स्तन पम्पको दस गल्तीहरू - समाचार - निing्गो बेबीटेक मातृ & शिशु टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड।
स्तन पम्पको दस गल्तीहरू
१. प्रतिक्षा झोलामा आवश्यक स्तन पम्प
धेरै आमाहरूले गर्भावस्थाको शुरुमै स्तनपम्प तयार पारेका हुन्छन्। वास्तवमा, स्तन पम्प पर्खिरहेको झोलामा आवश्यक चीज होइन।
स्तन पम्पहरू सामान्यतया निम्न अवस्थाहरूमा प्रयोग गरिन्छ:
वितरण पछि आमा र बच्चाको अलग
काममा पछाडि दूध
यदि तपाईको आमाले बच्चा जन्म दिए पछि कार्यस्थलमा फर्कनु पर्छ भने तपाईले ढिला वा चाँडो अग्रिम तयारी गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंको आमा पूर्ण घरमै घरमै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले गर्भावस्थामा ब्रेस्ट पम्प तयार गर्नुपर्दैन, किनभने स्तनपान सफलतापूर्वक सकिएको छ भने तपाईं स्तनपम्प प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
गर्भावस्थाको दौरान सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बढी सिक्नु र स्तनपानको सही ज्ञान र सीपको महारत हासिल गर्नु हो।
२. स्तनपान गराउँदा सक्सनको शक्ति जति उत्तम हुन्छ?
धेरै व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि स्तन पम्पमा दूध चुस्ने सिद्धान्त भनेको दूधलाई नकारात्मक दबाबले चुस्नु हो, जसरी वयस्कहरूले पानी पिउन परालको प्रयोग गर्छन्। यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ भने, तपाईं गलत हुनुहुन्छ।
ब्रेस्ट पम्प चूस्ने दुध वास्तवमा प्रो-फिडि sim अनुकरण गर्ने एउटा तरिका हो, जसले areola लाई एक दुध सरणी उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गर्दछ र त्यसपछि धेरै दुध निकाल्दछ।
तसर्थ, स्तन पम्पको नकारात्मक दबाब सक्शन शक्ति सकेसम्म ठूलो छैन। धेरै नकारात्मक दबाबले आमालाई असहज महसुस गराउँदछ, तर यसले दुधको एरेमा असर पार्नेछ। जब सम्म तपाईं स्तनपान गर्दा अधिकतम आरामदायक नकारात्मक दबाव पाउनुहुन्छ।
कसरी अधिकतम आरामदायक नकारात्मक दबाव प्राप्त गर्ने?
जब आमा दुध चुसाईरहेको हुन्छ, प्रेसर तल्लो गियरबाट बढाइन्छ, र जब आमा असहज महसुस गर्नुहुन्छ, तल्लो तनाव अधिकतम सान्त्वना नकारात्मक दबाव हो।
सामान्यतया, स्तनको एक पक्षमा अधिकतम आरामदायक नकारात्मक दबाव लगभग समान हुन्छ, त्यसैले यदि यसलाई एक पटक समायोजित गरियो भने, आमाले अर्को पटक यस दबाब स्थितिमा सोझै महसुस गर्न सक्दछ, र राम्रो छैन भने राम्रो समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
The. पम्पि time समय जति लामो हुन्छ, उत्तम
धेरै दुध पछ्याउन धेरै आमाहरूले एक पटकमा एक घण्टा स्तनहरू चुस्छन् र तिनीहरूको क्षेत्र फुलेको र थकित हुन्छ।
छाती पम्पको प्रयोग सकेसम्म लामो हुँदैन। पम्पि time समय धेरै लामो भएपछि दुधको एरेलाई उत्तेजित गर्न यो सजिलो छैन, र स्तनको क्षतिको कारण पनि सजिलो छ।
धेरै जसो अवस्थाहरूमा, एकतर्फी स्तन पम्पि 15 १ 15-२० मिनेट भन्दा बढी हुँदैन, र द्विपक्षीय स्तन पम्पिंगको लागि समय सीमा १ 15-२० मिनेटभन्दा बढी हुँदैन।
यदि तपाईंले पम्पको केही मिनेट पछि दूधको थोपा चुस्नुभयो भने, तपाईं यस समयमा स्तन पम्पिंग रोक्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि मालिश, हात दुहला इत्यादि प्रयोग गर्नुहोस्।
The. स्पिकर कभर केवल निर्माताको आकारमा उपलब्ध छ
केही आमाहरूलाई स्तन पम्प प्रयोग गरे पछि निप्पल दुखाइ, चोट, areola र edema हुन्छ। यो सम्भावना छ कि स्तन पम्पको सी cover कभरको आकार उपयुक्त छैन, किनभने धेरै स्तन पम्प उत्पादकहरूले खरीदको समयमा प्रदान गरेको होर्न कभर मानक हो। साइज २mm मिमी छ, त्यसैले आमाहरूलाई थाहा छैन कि त्यहाँ अरू पनि छन्। सी horn कभर को लागी आकारहरु।
वास्तवमा, निप्पल र सी hornको कभरको बिचको सम्बन्ध हाम्रो खुट्टा र जुत्ताहरू बीचको सम्बन्ध जस्तै हो। हामी टाढा जानको लागि आकारसँग मेल खानुपर्दछ।
स्पिकर कभरको आकार उपयुक्त छ कि छैन भनेर कसरी हेर्ने?
त्यहाँ निप्पल र कपको भित्ता बीचमा १-२ मिमी को दूरी छ। अरोलाको सानो अंश कपमा चुस्दछ, अधिकांश क्षेत्र बाहिर छन्।
Someone. कसैको दोस्रो हात स्तन पम्प प्रयोग गर्नुहोस्
अस्पताल स्तरको भाडाको स्तन पम्प बाहेक धेरै आमाहरू द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ, यो दोस्रो हातको घरेलु स्तन पम्पहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिदैन। विशेष कारण यो लेख मा देख्न सकिन्छ: एक दोस्रो हात स्तन पम्प प्रयोग गर्न सकिन्छ?
छ, छाती पम्प दुध चुस्न सक्दैन
प्रायः यस्तो सुनेको छ कि केही आमाहरू भन्छन कि स्तन पम्पले दुध पिउन सक्दैन, जुन स्तन पम्पहरूको अर्को ठूलो गलतफहमी हो।
तथाकथित प्रि-दुध र पोष्ट-दूध बिचको भिन्नता मुख्यतया स्तन दुधमा फ्याट सामग्री हो। "पछि दुध" मा अधिक बोसो हुन्छ, तर स्तन दुधमा फ्याटको मात्रा स्तन पम्पि theको लम्बाइले निर्धारित हुँदैन, तर स्तनसँग सम्बन्धित भर्ने डिग्री।
स्तन खाली छ, दूध मा अधिक बोसो। यद्यपि स्तन खाली गर्न स्तन पम्पिंगको प्रभाव स्तनपानको जस्तो राम्रो हुँदैन, यसले केवल तथाकथित फ्रन्ट दुधलाई मात्रै चुस्न सक्छ। जब स्तन दुधको एक भागलाई बाहिर निकालिन्छ, स्तन दुधमा पहिले नै पर्याप्त मात्रामा फ्याट हुन्छ जब स्तन धेरै सूज हुँदैन। धेरै
Clean. स्तन पम्प प्रत्येक पटक प्रयोग गर्दा यसलाई सफा र कीटाणुरहित गर्नुहोस्
स्तन पम्प सफा र स्वच्छ छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न धेरै आमाहरूले स्तनपान पछाडि स्तन पम्पलाई हरेक पटक सफा र कीटाणुरहित पार्नेछन्। सामान्यतया धेरै दुध पम्प नगर्ने आमाहरूका लागि यो गाह्रो छैन, तर यदि यो एक स्तन पम्प हो जुन मुख्य रूपमा स्तनपम्पमा निर्भर गर्दछ मेरी आमाले दिनमा धेरै पटक दूध पिउँदछ। यदि तपाईंले यसलाई सफा गर्नुपर्दछ र प्रत्येक पटक यसको बाँझ बनाउनु पर्छ भने, यो ज्यादै समस्या हो। केही आमाहरू अवतारको अभावका कारण दुध खेती गर्न छोड्नु पर्छ।
वास्तवमा, स्तन पम्प प्रत्येक पटक सफा र कीटाणुमुक्त हुनुपर्दैन।
सबै भन्दा सिफारिस अभ्यास: प्रत्येक प्रयोग पछि सफा र एक दिन मा एक पटक कीटाणुनाशक।
यदि स्तनपान बारम्बार हुने गर्छ (हरेक २ घण्टा स्तनपान), र बच्चा स्वस्थ र पूर्ण-कालिक छ, आमाले पनि अल्छी चोरी गर्न सक्छिन्: स्तनपानको पछि स्तनपम्प र बोतललाई फ्रिजमा राख्नुहोस्। एकचोटि फेरि फेरी २ पटक पछि र त्यसपछि सफा गर्नुहोस्, दिनमा दिनमा एक पटक कीटाणुरहित गर्नुहोस्। वा तपाईं सामानको 1-2 सेट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ र प्रयोग पछि तिनीहरूलाई सफा गर्न सक्नुहुनेछ।
I. मलाई थाहा छैन मसंग कति दुध छ,
यसलाई स्तन पम्पको साथ बाहिर चूसो
केही आमाहरूलाई थाहा छैन कि बच्चाले दूध खुवाउँदा कति दूध खायो, र पुस्तकमा सिफारिस गरिएको दुधको रकम पुगेको छ कि छैन, उनीहरूले स्तनपम्प प्रयोग गर्नेछन् र हेर्नुहोस्, कति दुध चुसाउन सक्छन् कति दुध प्रतिनिधित्व गर्दछ बच्चाले खान सक्छ।
यदि तपाईं ml० मिलि मात्र मात्र लिन सक्नुहुनेछ भने, तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईंको दूध निश्चित रूपमा तपाईंको बच्चाको लागि पर्याप्त छैन, र तपाईं आफ्नो बच्चामा दूध पाउडर थप्नुहुन्छ।
यो दृष्टिकोण सही छैन।
स्तन पम्प द्वारा दुधिएको दूधको मात्रा the baby बच्चाको खुवाइने दुधको मात्रा।
ब्रेस्ट पम्पि pro प्रो-फिडिंग नक्कल गर्ने एक तरिका मात्र हो, तर के सिमुलेशनले १००% प्रभाव हासिल गर्न सक्छ?
चिसो स्तन पम्पको सामना गर्नुपर्दा, आमाको शरीर-अक्सीटोसिन र फलस्वरूप दुधको दायराबाट उत्पन्न प्रेमको हार्मोन सीमित छ, र दूध खुवाउने क्रममा आमा र बच्चाबीचको प्रेमले आमालाई बढी दूध दिनेछ, फुट पछि बच्चाले बढी खानेछ दूध
Breast। स्तन पम्पको बारम्बार प्रयोग गर्नाले छातीमा चोट पुग्छ
आमाहरूमा यो भनाइ पनि छ कि स्तन पम्पहरूले स्तनलाई चोट पुर्‍याउन सक्छ। वास्तवमा, जबसम्म तपाईं सही स्तन पम्प हर्न कभर छनौट गर्नुहुन्छ, उचित नकारात्मक दबाव र स्तन पम्पिंग समय प्रयोग गर्नुहोस्, स्तन पम्पको नियमित प्रयोगले स्तनहरूलाई हानी गर्दैन।
जे होस्, स्तनपम्पबाट स्तनको दूध हटाउने प्रभाव खानपानको जस्तो राम्रो हुँदैन, त्यसैले दुध संकलन र दुध घटाउने जस्ता समस्या बढी हुन्छ।
१०. अपर्याप्त आहारको बारेमा चिन्ता लिनुहोस्, त्यसैले यसलाई चुस्नु सुरक्षित हुन्छ
यो वास्तवमै ठूलो गल्ती हो।
किनकि बच्चाले एक पटक खाना खुवाउन धेरै समय लिन्छ, वा बच्चा पूर्ण नभएकोमा चिन्तित छ, धेरै आमाहरूले आफ्नो स्तनको दूध खुवाउन बोतल बाहिर निकाल्छन्।
यद्यपि यो पछि फेला पर्‍यो कि बोतललाई बाहिर निकाल्न यो अत्यन्तै समस्याग्रस्त थियो र यसलाई पूर्ण आहारमा परिवर्तन गर्न चाहान्छु। यद्यपि बच्चालाई बोतल खुवाउन प्रयोग गरिन्छ। यदी आमाको धेरै दुध छ भने पनि पोषण दिन धेरै समस्याहरू छन्।
अघिल्लो:कसरी बच्चा कपाल क्लिपर छनौट गर्ने?
अर्को:बच्चाहरूको पानी टेबलवेयर, खानको लागि भूक बढाउनुहोस्